Minisitry ny fitsarana : Manao solomaso tsy mitovy | Ny Valosoa Vaovao
Minisitry ny fitsarana : Manao solomaso tsy mitovy
Nanitrikitrika ramatoa ministry ny fitsarana ny amin’ny didim-pitsarana momba an-dRavalomanana ny amin’ny raharaha 07 febroary sy ny filazany fa tokony hanao fanohanana ity enjehina. Tsy misy an-kanavaka ny hampiharana ny didy nivoaka araka ny nambarany. Tantara mitohy iny, fa efa namoaka ny heviny ihany koa ny filoha teo aloha ny momba izany ary mazava ny nambarany. Avela eo iny, fa ny tena tiana horesahina, dia ny nanindrian’ny minisitra, fa tsy maintsy mihatra avokoa ny didy navoakan’ny fitsarana. Dia eo indrindra no tiana ambara, taiza ramatoa minisitra no tsy nahitana teny na kely aza momba ny didy navoakan’ny fitsarana ny momba ireo mpitarika sendikaly eo anivon’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar, fa hoe afaka miverina miasa izy ireo ary nahazo rariny? Niharihary, fa tsy nivaky loha tamin’ireo mpiasa ireo mihitsy ny tomponandraikitra eo anivon’ity kaompania ity, izay fihetsika nampitampim-bava ny mpanara-baovao sy ny vahoaka amin’ny ankapobeny. Efa ho firy taona izao io raharaha io kanefa tsy noraharahian’ny fanjakana na ny minisiteran’ny fitsarana sahanin-dRamatoa minisitra ihany koa. Dia manidintsidina eny fotsiny ilay didy nivoaka. Tsy tokony ho nitabataba momba izany ve izy ho fampiharana ny didim-pitsarana araka ny nambarany toy ny nataony izao? Sa ireny olona ireny tsy atahorana amin’ny fifidianana ho avy, fa ny filoha teo aloha ahiana mafy ny hahalany azy? Misarika hieritreritra izany, fa voasaron’ny politika ny minisiteran’ny fitsarana ary karazany manao solomaso tsy mitovy ny tomponandraikitra voalohany ao aminy, hany ka mahita zavatra samihafa.
Visites du jour: 5 747